jacaylkii Dhabta ahaa iyo dhambaal caashaqa Qaybta 2aad - Hoyga Aqoonta
jacaylkii Dhabta ahaa iyo dhambaal caashaqa Qaybta 2aad
Nambarka Xubinka : 261
Taariikhduu xubinku is qoray golaha: Sep 2011
Wadanka : Jijiga
ka qayb galka: 131
Isku cel-celinta qiimaynta heereed : 30
Waxaa la qoray : [ 28-05-2012 ]
ASc akhristayaasha sharafta leh, maqaalkeenii JACAYLKII DHABTA AHAA IYO DHAMBAAL CAASHAQ ayaan qaybtiisii labaa didiin wadaa ee ka bogasho wacan.
Qaybtii hore waxay inoo maraysay: ..........hadaba akhristoow dhambaalkaasi oo aan E-mailka ugu diray isla galabnimadii xilligaan qorayayna ay I hoggaaminayeen dareen kalgacal oo iga awood badiyay baan doonayaa inaad ila akhrisato ee ku soo dhawoow...... ............
qaybtan labaadna waa tan:
“From:naf adduunka uu jecel, adi kuu ilmaysoo ku illaawi diidoo kuu oomman kaligaa!
To: Xiddigtii Qalbigayga ilwaad Maxamed (ilwaad aragsan)
Gacalo iga hano salaan aad iyo aad u qiimo badan salaantaasoo ka caraf badan miskiga, ka macaan malabka, ka qiimo badan diamond-ka, ka culus buuraha. Taasoo ka soo go’day qalbi si kal iyo laab ah kuu jecel, naf kuu hanwayn adiga kuna haminaysa kasbashada qalbigaaga qaaliga ah. Gclso waad la yaabi doontaa sababtaan warqaddan kuugu soo qoray anagoo maalin walba ku sheekaysanna netka telkana iskala hadalna, balse haka fakarin taa waayo qalbiga ayaa doonaya inuu kula xidhiidho oo kaa warqabo xilli walba kuuna muujiyo hadba dareenka nafta iyo heerka uu ka marayo jcylkaagu. Xubi aniga jacaylkaagu meel halis ah buu iiga yaallaa, wayna adagtahay sidaan kuu hilmaamo, waligay isma dhihin oo kuma fakarin intaa in le’eg ayaad qof jeclaan doontaa balse noqotay oo dhacday inaan sidaa kuu jeclaadee, macaan ha noqon mid igu cidlaysa jacaylkaas oo meel bannaan iiga dhaqaaqda. Qalbigaygu wuxuu ilaashada naftaada si uu u hanto jcyl waara, anigu waxaan ahay adiga! Ee adna noqo aniga!
Ilwaad! Ma ogtahay inaan dumarka oo dhan aan adiga kaligaa kaa doortay? Ma ogtahay inaan har iyo habeen kuu hiloobo oo aad daqiiqad kasta maskaxdayda hirato? Ma ogtahay inaad sida gawaaridu wadooyinka u maraan oo kale aad u dhex qaadday qalbigayga waddooyinna aad ka samaysatay dhexdiisa?! Ma ogtahay saq dhexe habeenkii inaan ku soo gocdo kuuna ilmeeyo macaan? Ma ogtahay qalbiyeey inaad tahay noloshaydii la’aantaana ay dhibaato igu tahay? Ma ogtahay gacalooy inaan daacad kuu ahay? Mase ogtahay elwaadeey in jacaylkeenna aan dhulka ka ilaaliyo, una diido wixii dhibaato iyo carqalad ku noqon karaya?
Qaali , nolosha aduunyada ayaa sidaa ah, huuno fiicnaan lahaydaa inaad qalbigayga arki karto waayo waxaad ogaan lahayd sidaan daacad kuugu ahay markaasaad dhib jacayl iga dhowri lahayd! balse waxaan rajaynayaa inaad ogaan doonto inshaa Allaah. Elwaad waan ku jeclahay gacaliso, ifka noloshu waa adi, kaama maarmo oo qayb ka mid ah noloshaydi baad tahay, macaanto fadlan ila fahan jacaylka aan kuu qabo baaxaddiisa si aan u guranno mirihiisa, ogoow ilwaad waxaynu dhisaynaa aasaaskii guri aan dagi lahayn si aan mustaqbalka ugu noolaanno. Macaan si fiican u akhri ereyadaan:
Ifka taan ka doortaay… ilwaadeey qurxooney…ubixii naftaydaay….ilmadayda qubatiyo…ila arag jacaylkaan… adi kuu ilaashoo..aawadaa u beeriyo.. inanyahay adduunyada.. inta dumar la uumee… afrikiyo oroobba leh… adaan kaa astaystoo… naftu ku ogolaatee …adna ila ogsoonoow!
Gacaliso jacayl xaasid ma waayo ayaa horay loo yidhi sidaa awgeed dedaal adag ayaa la inooga baahan yahay si aan ugu guulaysanno hadafkeenna iyo hamiga aan wadanno. Anigu waan kugu kalsoonahay ee igu kalsoonoow, lagama yaabo in la igu kaa diro ama sadexeeye ii sheeko xumeeyo waayo jcylkeena ayaa igala wayn. Macaan wan ku jeclahay, si dhab ah oo aan dhalanteed ahayn, si daacad ah oo aan khayaano ahayn. Si run ah oo aan been ahayn, waan ku jeclahay oo danta aan kaa leeyahay waa guur iyo guri xalaal ah oo aynu yagleelno Alle ha inoo aqbalee. Macaanto qiimaha jacaylku leeyahay waxaad ogaan kartaa marka aad haysato qof ku jecel adna aad jeceshahay oo aad qaybsataan nolosha, farxad iyo murugaba qaybtiisa qaadanaya. Jacaylkeennu waa curdin oo waa ugub mar dhow dhashay hadaba sida ilmaha hadda dhashay loo ilaaliyo oo kale ayuu doonayaa in loo ilaaliyo si uu koro oo u hanaqaado.
Ilwaadey xasuuso oo xushmee jacaylka, qadari kalgacalka, ixtiraam wada socodka iyo xiriirka, adkee oo ilaali axdiga, ha jabin ballamaha, koolkooli caashaqa, iga ilaali dhib anna waan kaa ilaalinayaaye, I qadari oo ii xushmee maadaama aan ahay naf ku jecel rajaynaysana mustaqbalka inaad afo lagu baraaro u noqoto inshaa Allaah. Macaan maskaxdaada u isticmaal inaad uga fikirto kuna kala garato wixii xun iyo wixii san. Ahoow qof dhowrsoon oo ilaalisa diinta iyo dhaqankeeda soomaaliyed. Qiyaas oo cabbir jacaylka aan kuu qabo baaxadiisa iyo sidaan ugu heellanahay inaan jacaylkaas qiimeeyo oo ilaaliyo. Naftu adigay ku rabtaa xilli kastana adaan ku soo xasustaa mar mar kaligay baa iska ilmeeya mcn anoo haysta picturekaaga, sawirka ayaan la hadlaa oo u sheegaa inaan jeclahay iimase jawaabayo, sorry! markaasan ogaadaa hadana inuu picture yahay oo uusan hadlayn, maalintii dhowr jeer hadaanan codkaaga maqlin ama sms kaaga arkin deganaan la’aan baan dareemayaa iyo wal wal.habeenkii kaligay baan sariirta ku fakaraa anoo ku fakaraya sidaan jacaylkeenna uga guul gaari karno, macaan ilove you for ever, ee gacaliso iga hano ereyadaan ay kuu soo saartay maskaxdayda adiga kugu waalatay:
saymihii guyoo da'ay…ama sagal daruureed.. oo subaxdii horaad..nafta uula simantahay…sida roob la sugayiyo….saxansaxo udgoon baad ..nafta uula simatahay ..sida hooyo sabi iyo…seexinaysa cunug baan..salal kaa ilaashaa…sidaan kuu jeclahay adi…saatir baa garanayoo..subaxdii la keenaba ..adaan kugu sahwiyayaa…sahal maaha caashaqe ..waligaa ha sii dayn..sagaleey ilwaadeey …sahal maaha caashaqu …soo dhaafyay laabtoo…dhamaan wuu i saaqee..saacaddi la joogaba..sidaa ii xasuusnoow…. Saatiroow Ilaahow…ha i seejin inantaan…sowjadayda ka dhigoo…sundisiyo saciid iyo…suhayb iyo ayaaniyo …samaaliyo fardowsiyo…ubad suubban iga sii.aamiin..aamiin
hadana mar kale naftu waxay doonaysaa inay kuu hal abuurto macaan markalena waxay ku leedahay naftaan ku jeclaatay:
inantaan jeclaadaay..ilwaadeey udgoonay....arxam iyo ixsaaneey..sidii ubax magooloo..kala furay afkii baad..nafta uuga dhigantahay..sida oori wacano...edebsanoo qurxoonoo..ixtiraam u dhalatoo..aroos wacan ku filayaad..nafta uuga dhigantahay..iilwaadeey jacaylkii…waan ababiyaa wali..albaabada wadnaha iyo..uurkuu dhex jiifaa..ku illoobi maayoo..dumar aynigaagaa..isha maanan saarine..axdigii ha sii dayn…ha illoobin wacadkii.
Gacaliso aad baan kuu jeclahay xaqiiqdii, noloshaydi baad tahay, qayb ka mid ah jidhkaygi baa tahay, qalbigaygi adaa qaataye ii daryeel, macaan naftaydu aday ku rabtaa naf kale yeeli mayso kuna qanci mayso, waayo qalbigaygu laba qof ma qaado hal qof ayuu qaadaa qofkiina waa adiga. Qalbi waad dareemi kartaa holaca uu igu hayo jacaylkaagu, mcn aad baan kuu jeclahay halbowlaha naftaad tahay, iilwaad jacaylkaas baaxadda wayn baan kuu qaaday ee ila ilaali ballanka oo beerta caashaqa ila waraabi aan wada guranno miraha aan beerannee, gacaliso macaan wali maskaxdaydu inay kuu hal abuurto ayay doonaysaa mar kale ayay hadana waxay naftu ku leedahay:
“inantii xishoodkiyo..xilkasnimo lahaydeey..xubiyeey iilwaadeey ..xilo tii u rooneey..xamar geenyo quruxeey....xiisaha kalgacalkaa..igu xeeran abidkay..xarakada ilwaadkiyo..xubnahaaga quruxda leh..gacmahaaga xaadda leh..kubabkaagan lay xulay..dhexda xirane labigaa..dhaayaha xishoodka leh..dibnahaan xanta aqoon..dhererkaagan xoogga leh..markaan soo xasuustaba ..xiisaha kalgacalkiyo…xadxantada jacaylkaa..xaadeyda kiciyee..qalbigay xiro oo ..xayn daab uyeeloo..xubiyeey jacaylkaa ..ii xasuuso waligaa..I xusheemeena abidkaa”
Gacaliso ugu danbayntii waxaan ku odhanayaa “waan ku jeclahay” qalbigayguna aduu ku doonayaa oo kuu oomman yahay macaan farxad iigu nooloow ha murugoon waligaa oo dhib Alle kuma tuso, aad baan kuu jeclahay kulamana rabo wax ku dhiba inaad aragto mcn, gacaliso farxad iyo damaashaad iyo rayn rayn ku nooloow.
“Dadab iyo aroos..nolol daacadoo wacan…aan wada dakaynee….farxad iyo damaashaad..Daa’imkeen hanagu simo”..aamiin..aamiin….xubi, macaan, gacaliso, qaali… finally waxaan inoo rajeeyey jacayl wacan oo waara, xubi waxaan kuu rajeeyey in dhankasta khayr Alle kaa siiyo hamigaagana kuu sahlo. Lastly waxaan ku leeyahay ilwaad cadeeyeey “naftii aan jeclaadaay naruuriyo barwaaqiyo nabad iigu nooloow ..nabad iigu nooloow” aamiin. By gacaliyahaagii ifka kuugu jeclaa.”
hadaba akhristoow ka soo qaad dhambaalkaasi adiga ayaaba laguu soo diray oo hadaad gabar tahayna gacaliyahaagii baa kuu soo diray hadaad wiil tahayna gacalisadaadii baa kuu soo dirtay hadaba, su’aashu waxaa weeye maxaad ugu warcelin qofkaa sida xad dhaafka ah kuu jecel ee dhambaalkaasi qurxoon kuu soo diray?
Mowduucii hore : jacaylkii Dhabta ahaa iyo dhambaal caashaqa Qaybta 2aad -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Hassan hashi
Saxiixa : Hassan hashi
Nabsigu kaa weecan maayo!
Qalbigu kuu wiiqmi maayo!
Warqad gaara u dir Hassan hashi
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Hassan hashi
Jawaabta: jacaylkii Dhabta ahaa iyo dhambaal caashaqa Qaybta 2aad
Abwaan waa lagugu dheeryahay intaasi waxay ka soo go'day gabayaa la buka jacayl.
Ilaahay ha kuu fududeeyo howlaha adduun.Mahadsanid
Nambarka Xubinka : 45
ka qayb galka : 207
Gabadhii intaas loo qoro ee qaadan weydaa waa qaldantahay baan qabaa. Af macaani abwaan adaa dhammeeyey inkastoon murti abwaan lagu gaarini ee haddaan ka jawaabo su aashaada ugu danbaysa waan qanci lahaa kuna raaci lahaa. abwaan waa qoraal ixiise geliyey mahadsanid.
Warqad gaara u dir kibirley
Raadi qoraalladuu qoray/qortay kibirley
Waxaa la qoray : [ 29-05-2012 ]
aad iyo aad buu iiqanciyay run ahaantii hadaan buuska inanta kujurilahaa jawaabteydu waxeey ahaan laheyd haaa haaa oo waan kaa aqbalay xitaa haduu jaceylkiis ihaayeen
Nambarka Xubinka : 190
ka qayb galka : 300
Aniga haddii xubbigaygu intaa ii soo qoro waan bururi lahaa sida bur cadkii. Ku mahadsanid abwaan. Ummu kamaalna waan soo dhawaynayaa
Warqad gaara u dir Amiin
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Amiin
Anigu waxba ka sheegi maayoo wakhtigii inaan dhaafaan u malaynayaa kkkk.Abwaan mahadsanid laakiin heeso wanaagsan erayo laga dhigi karo aya ku jira
Abwaan dad baa ila akhristay sheekadan murtida wadata qaarkood waa ilmeeyeen kkkk dumar bay u badnaayeen calool jileec aniguse waxaan ka'eegayey dhanka sheeko ahaan waxayna i yiraahdeen calool adakidaa!!!!!! Waan kaaga mahad naqayaa sababta oo ah waxaad dadka baraysaa sida loo qoro warqadaha waana laga faa'iidaystay.Qiimaynta ugu sarraysa iga hano
Nambarka Xubinka : 203
Wadanka : Habeenkii lee maxaa kale!!
ka qayb galka : 56
Waah waah waxaasaa jacayla
Warqad gaara u dir habeendhaladyare
Raadi qoraalladuu qoray/qortay habeendhaladyare
sheeko mac hadana mac waaa markay macaanka ka badataa loo yaqaan mac. mahadsanid abwaan.
Nambarka Xubinka : 194
Wadanka : Adduunka
ka qayb galka : 210
siduu sheegay Xuseen dumar jacayl u bukuu wax la akhristay kkk mahadsanid ABwaan waan ka helay qoraalkan layaabka leh.
Saxiixa : ruunyarey
Adduun waa aqoon & qalinkoo aad hayso
iyo maraad jalaato qabow cunayso
Warqad gaara u dir ruunyarey
Booqashada booska ruunyarey la jantay
Raadi qoraalladuu qoray/qortay ruunyarey
adduunka, adi, akhristayaasha, asc, doortaay, hadaba, hore, ifka, inoo, jacaylkii, jecel, ka, kuu, leh, maq, maqaalkeenii, maraysay, naf, qaybtii, qurxooney, sharafta, taan, uu, waadeey, waxay
Dhacdo! (sheeko xiiso badan) Qaybta 2aad. Hassan hashi Sheekooyinka 5 13-11-2013 03:41 PM
Kumbiyuutarka iyo barashadiisa 2aad Halyeyga Afrika Kumbiyuutarka & Internet-ka 8 17-08-2012 08:08 PM
Hani iyo Hanad Qaybtii 2aad Hassan hashi Gabayada 12 07-06-2012 11:14 AM
Hani iyo Hanad Qaybta koowaad Hassan hashi Gabayada 9 04-06-2012 12:01 AM
Jacaylkii Dhabta ahaa iyo Dhambaal culus! Hassan hashi Sheekooyinka 7 27-05-2012 10:51 PM